Soamahamanina : « Handoto ny renirano ny fitrandrahan’ny Sinoa » | NewsMada
Ho an’ny fikambanana Collectif Tany, hanapotika ny reniranon’Ikalariana ny fitrandrahana volamena ataon’ny Sinoa any Soamahamanina. Hiantraika any amin’ny zavamananaina sy ny fahasalaman’ny mponina koa izany.
Tsy nahafa-po ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Collectif Tany ny valin-tenin’ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana ONE sy ny fehin-kevitry ny vaomiera manokana (comité ad hoc) milaza fa « azo fehezina ny fiantraikany ratsy amin’ny fitrandrahana ataon’ny orinasa sinoa any Soamahamanina ».
Ho azy ireo, hanapotika ny tontolo iainana sy ny fahasalamana ny fitrandrahana volamena ataon’ny Sinoa any Soamahamanina, amin’ny fampiasana akora simika “mercure” amin’ny fitrandrahana madinika, sy ny “cyanure” ho an’ny fitrandrahana vaventy indostrialy. Voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitra mikasika ny tontolo iainana nomen’ny ONE ity orinasa ity, fa “tsy mampiasa akora simika amin’ny fanasarahana farany ny volamena” (and.85). Tsy nofaritan’ny ONE mazava ny besinimaro anefa ny akora ampiasaina sy ny dingana samihafa ataon’ny orinasa amin’ny fitrandrahana.
Tandindomin-doza ny reniranon’Ikalariana, mandalo any an-toerana sy ampiasain’ny Sinoa. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny raharaha, “tsy maintsy manangana toerana manokana fanadiovana ny rano ny orinasa sinoa, mialoha ny hivoahany any amin’ny reniranon’Ikalariana”. Mitaky ny antsipiriany mikasika izany ny Collectif Tany, hatrany amin’ny fiantraikany amin’ny rano any ambanin’ny tany, ny nofon-tany, ny renirano sy ny farihy manodidina, sns. Ho voafehin’ny ONE ve ny fiantraikany ankehitriny sy ny hoavy?
Tsy fantatra ny habatsehan’ny rano ampiasaina
Manampy ireo, loharano fisotron’ny mponina ny reniranon’Ikalariana. Nanome fahazoan-dalana vonjimaika ny Sinoa ny Fahefana nasionaly misahana ny rano sy ny fanadiovana (Andea). Tsy voafaritra anefa ny fe-potoana amin’ny maha vonjimaika azy. Manahy ny Collectif Tany sao lasa maharitra atsy aoriana kely ny lazaina fa vonjimaika.
Voafaritra ao anatin’ny bokin’andraikitra fa tsy mahazo mihoatra ny 270 m3 (260 m3 fitrandrahana; 10 m3 ampiasaina ao an-tokantrano) ny hadirin’ny rano azo ampiasain’ny orinasa sinoa. Tsy misy vaovao omen’ity orinasa ity anefa mitatitra ny habetsahan’ny rano ampiasainy, ary tsy misy mahafantatra koa ny ilain’ny mponina amin’ny famboleny sy ny hosotroiny.
Raha efamira fito no trandrahin’ny Sinoa ankehitriny amin’ny 57 nahazoany hitrandraka any Andravolobe. Loharano avy aiza no hampiasainy amin’ny efamira 50 ambiny? Inona sisa no hampiasain’ny mponina?
Nanapotika ny tontolo iainana ny fampiasana mercure sy cyanide tany Papouasie Nouvelle Guinée. Na nisy aza ny fanadiovan-drano, simba foana ny sasany amin’izy ireny niantraika any amin’ny zavamananaina manodidina. Efa niharan’izany koa any Sina. Any amin’ny Repoblika Dominicaine, tsy namokatra intsony ny fambolena kafe vokatry ny fitrandrahana volamena. Namofona maimbo ny ranon’orana sy ny rivotra niainana.